Samachar Batika || News from Nepal » विवाहित महिलासँग किन आकर्षित हुन्छन् पुरुष ?
पुरुषहरु अविवाहित महिला देखेपछि मरिहत्ते गर्छन भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर, होइन कतिपय पुरुषहरु अविवाहित भन्दा विवाहित महिलासंग बढी आ’कर्षित हुने गर्दछन। किन ? धेरैको जवाफ हुन् सक्छ यौ’नका लागि । तर, यौ’नकै लागि मात्रै पुरुषहरु विवाहित महिलासंग आ’कर्षित हुने भने होइन। यसका पछाडि बिबिध कारणहरु छन्। हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणले यसका बिबिध पक्ष औल्याएको छ।
संसारका विभिन्न खाले समाजमा पुरुषले युवती भन्दा विवाहित महिलासँग यौ’न स’म्बन्ध राख्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो ।तर, प’रस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् । जसलाई देख्नेवित्तिकै पुरुषको उत्तेजना १८० डिग्रीसम्म पुग्छ ।
जहिले पनि यौ’वनपूर्ण अवस्थालाई महिलाको आकर्षणसँग जोडिन्छ । पु’ष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश तथा कसिलो शरीर भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ । त्यसैगरी विकसित स्’तन पनि महिलाको शा’रीरिक आकर्षणको मापदण्डमा पर्छ । विकसित स्तनले भावी सन्तानको पोषणको सुनिश्चिततालाई संकेत गर्छ ।
प्रायः सबै समाजमा महिलाको आकर्षणमा कम्मर–नि’तम्ब अनुपातको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । स्त’न महिलाको अ’ङ्ग भए पनि पुरुषले पनि यौ’न आनन्द प्राप्त गर्ने भएकाले नै होला, उनीहरू यसप्रति आ’कषिर्त हुन्छन् । स्तनलाई महिलाको सुन्दरतासँग जोडिन्छ । प्रायः पुरुषले आफूभन्दा केही होचा महिलालाई रुचाएको पाइन्छ।
केही अपवादलाई छोडेर प्रायः व्यक्तिले आफ्नो अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो अनुहारमा विशेष आकर्षक पाउन सक्छ । दायाँबायाँ मिलेको हुनुका साथै अनुहारको माथिल्लो भाग (निधार भएको भाग), मध्यभाग (आँखा, नाक, गाला) अनि तल्लो भाग (ओठ, चिउँडो) समान अनुपातको हुनुलाई सुन्दर अनुहार मानिन्छ । सम्भवत तपाईं आकषिर्त हुनुभएको महिलामा पनि यी कुरा पक्कै होलान् ।
अब यसका विविध पक्षहरु :अर्थात किन मन पराउछन त ?
यौ’न, हरेक समाजका लागि गौण बिषय हो। अझ पूर्वीय समाजमा त यौ’नको कुरा गर्नु अ’नैतिक र अस्वभाविक नै मानिन्छ। का’नुन अनुसार पनि यौ’नको कुरा गर्नु यौ’न हिँ’सा अन्तर्गत पर्छ त्यसकारण दुवैको मन मिले पनि यौ’न प्रस्ताव राख्न त्यति सजिलो र सहज छैन। अझ अविवाहितलाई यस्तो प्रस्ताव राख्न त ठूलै हिम्मत गर्नुपर्छ। तर, यौ’न सम्बन्धको प्रस्ताव राख्न अविवाहित भन्दा विवाहितलाई केही हदसम्म सजिलो हुन्छ । तसर्थ पनि पुरुषहरु विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ।
विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा उनीहरुप्रति आ’कर्षित हुन्छन् । पुरुषहरुलाई विवाहित महिलाले हरेक समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
विवाह गरेका महिलाले विवाह नगरेकाको तुनलामा पा’र्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् । विवाह पछि उनीहरुलाई सधै आफ्नो घर परिवारको चि’न्ता हुने गर्छ । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ । त्यसकारण पनि उनीहरु विवाहित महिलातर्फ आ’कर्षित हुन्छन्।
विवाह गरेकी युवतीले घर र घर बाहिरको सबै व्यवहारलाई सही ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सक्छिन् । यसका साथसाथै उनले आफ्ना पी’डाहरुलाई लुकाएर पनि मिठो मुस्कान प्रदर्शन गर्न सक्छिन् ।
विवाहपछि महिलाको हर्मो’नमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७६, बुधबार ०३:४८